Mayelana NATHI - Zhuhai Sanjin Industrial Co., Ltd
Eyasungulwa ngo-1994, iZhuhai Sanjin Industrial Co., Ltd itholakala eNanping Industrial Park enhle eZhuhai. Kuyibhizinisi elaziwa umhlaba wonke elenza i-R & D, ukukhiqiza nokuthengisa izingoma ze-karaoke eziqeqeshiwe. Le nkampani inamandla aqinile wezobuchwepheshe, inethimba le-R & D elinesibindi nethimba lokukhiqiza umculo eliqeqeshiwe. Ithole amalungelo obunikazi amaningi kazwelonke futhi ithole isitifiketi sohlelo lwekhwalithi ye-ISO90001.
Imikhiqizo ifaka umshini we-KTV karaoke, isikrini sokuthinta, imakrofoni engenantambo, i-amplifier yobuchwepheshe, i-high-definition DVR kanye nomshini wokuqala we-DVD karaoke, ukwakheka okwenziwe ngabantu, ukusebenza okulula futhi okulula nomphumela ophelele wokulalelwayo nokubukwayo yizici eziyinhloko zomkhiqizo. Kuthunyelwe e-United Kingdom, eFrance, eRussia, e-Hungary, e-Costa Rica, e-Colombia, e-United Arab Emirates, e-India, e-Thailand, e-Vietnam, e-Philippines, e-Malaysia, e-North Korea nakwamanye amazwe, ngekhwalithi enhle kakhulu, isevisi ephelele, uzuze udumo lwasekhaya namakhasimende angaphandle.
Lwela impumelelo, qhubeka uthuthuke, uqhubeke ngokuthuthukisa ukuncintisana okuyisisekelo, futhi usungule ubunye obuzwana phakathi kwabasebenzi, amabhizinisi kanye nomphakathi. USanjin uthuthuka njalo ngokubukeka okusha!